Ngwa ngwa: Mgbanwe Mgbanwe Obere maka $ 15 | Martech Zone
You nwetụla mgbe ị nwere oru ngo achọrọ naanị obere tweaking? Agbanyeghị na anyị nwere onye mmebe oge niile dị ịtụnanya, ọ fọrọ nke nta ka m nwee obi amamikpe na-arịọ ya ka ọ gbanwee ihe eserese ma ọ bụ mepụta faịlụ n'ụdị dị iche n'ihi na anaghị m asụ Photoshop nke ọma. Ọ bụ nna ya ukwu, ya mere achọrọ m ka ọ nọrọ oge ya na -emepụta ihe ịtụnanya infographics, na-acha ọcha, oku na-arụ ọrụ na akara anyị. Ihe niile ọzọ, ekwesịrị m iji ọrụ dịka Ngwa ọsọ.
Ngwa ọsọ bụ ugbu a na beta emechiri maka 99design ndị ọrụ mana ejiri m n'aka na ọ ga-abụ nnukwu ọrụ. Iji jiri ya, ị dị:
Mepụta ọrụ - Bulite faịlụ nhazi ma gwa Swiftly ihe ịchọrọ ịgbanwe.
Na-arụ ọrụ ahụ ngwa ngwa - Ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ ma nyefee gị ya n'otu ụbọchị ahụ.
Kwenye ma kwụọ ụgwọ - Budata faịlụ ndị ahụ, ma kwado mgbanwe ndị ahụ. Job mere.
Offọdụ n'ime ọrụ ndị Swiftly depụtara - mgbanwe mgbanwe, mgbanwe kaadị azụmahịa, ịdegharị foto & ihe ọkụkụ, ọrụ ihe osise, ntinye foto, Ndozi Powerpoint, mgbanwe mgbasa ozi mgbanwe, akara ngosi akara & tweaks, dezie ederede, mgbanwe ndebiri ahịa, na mgbanwe faịlụ.
Ọzọkwa, echeghị m na nke a bụ ọrụ na-anọchi onye mmebe gị, mana ọ bụ nke nwere ike iwepu ọrụ ndị ahụ mgbe ha na-arụ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ n'ezie!